Hiran State - News: Shiikh Shariif oo dowlada Turkiga doonaya inuu kula heshiiyo siyaasado cusub si uu xiriirka ugu jaro wadamo ay ka mid yahiin America, Yurub iyo IGad oo ay Ethiopia uguhoreyso.
Shiikh Shariif oo dowlada Turkiga doonaya inuu kula heshiiyo siyaasado cusub si uu xiriirka ugu jaro wadamo ay ka mid yahiin America, Yurub iyo IGad oo ay Ethiopia uguhoreyso.
HS:-Shiikh Shariif oo dowlada Turkiga doonaya inuu kula heshiiyo siyaasado cusub si uu xiriirka ugu jaro wadamo ay ka mid yahiin America, Yurub iyo IGad oo ay Ethiopia ugu horeyso kedib marikii uu ka codsaday in la siiyo malaayin Dolar intya uusan go,aankaasi qaadan.
Tan iyo waxii ka danbeeyey booqashadii uu Somaliya ku tagay R/wasaaraha Turkiga waxaa soo badanayey isbedelo siyaasadeed oo ku qotoma dano gaar ah inta badana aan ka turjumeyn maslaxada umada Somaliyeed. sida lagu helayo warar lagu kalsoonan karo Shiikh Shariif oo aad uga wal walsan mudada ka harsan xiligiisa oo hada ku soo aruurtay dhawr bilood ayaa hada doonaya si uu u qaato hanti badan oo lagu shegay dhawr boqol oo Milyan oo shacabka Somaliyeed u aruuriyeen dowladaha Islaamka iyo wadamada daneeya arimaha Somaliya inuu doonayo inuu qaab siyaasadeysan kula wareego isagoo dowlada Turkiga ka dhaadhicinayo siyaasado aan la hubin sidey ku dhaqan gali doonaan.
Shiikh Shariif oo dhawr sano ka hor aan aheyn shaqsi kala yaqiinay meesha ay u socoto siyaasada Somaliya iyo mida aduunyada looga dhaqmo hadey noqon laheyd mid diin iyomid maadi ah hadane maanta waxuu isku arkaa siyaasi weynaaday oo wadamada caalamka la geli kara siyaasadii uu doono.
Shiikh S hariif ayaa dowlada Turkiga kala hadlay sidii loogu soo gacan galin lahaa lagac lagu qiyaasay 400 Million oo ay aduunyadu u aruuriyeen in wax looga qabto dhibaatada ka taagan Somaliya siiba abaaraha oo la doonayey in loo isticmaalo dhinaca gar gaarka ayuu Shiikh Shariif kula kor kortamayaa dowlada Turkiga.
Soo jeedintii Shariifka waxaa ka mid ahaa in dowlada Turkiga siiso 210 Million hadii ay taasi suuragalisana uu xiriirka u jarayo wadamo uu ka xusay Mareykanka, Ethiopia iyo dhawr wadan oo Yurubiyaan ah isagoo hadaladiisa ku daray inuu wax weyn ka bedelayo TFGda hada jirta inta aan la gaarin waqtiga u harsan. waxuuna dowlada Turkiga si dadban uga dhadhicinayaa in inta badan mudanayaasha baarlamaanka iyo gudoonkeedaba ay ka amar qataan dowlada Ethiopia laakinse uu isagu siyaasad ahaan jecel yahay in dalka Turkiga buuxiyo booska wadamada u sheegay in uu xiriirka u jarayo.
Warar aan la hubin ayaa sheegayo in dowlada Turkiga madax ka tirsan ay arintaas u riyaaqeen iyagoo waliba diyaar u ah hadii Shariifka ka dhabeeyo arintaasi iney dalka Somaliya u dirayaan ciidamo gacanta ku dhigi kara dalka oo dhan ayna UN-ka ka soo dhameynayaan arintaas.
Wararkii ugu danbeyey ayaa sheegayo in Shariifka doonayo inuu dalka Turkiga u magacaabo safiir isaka ka amar qaata si howlaha iyo siyaasadahaan cusub uu u fuliyo. dhinaca kale dhawaaantan ayaa lagu wada in baarlamanka si too ah loo farageliyo hadii lagu guuleysto in shirka wadatashiga wajigiisa labaad uu ka dhaco Puntland iyadoo la isticmalayo awoodo aan la aqoon meel ay salka ku hayaan inta badana ka imaan doonta Shiikh Shariif si meesha looga saaro baarlamaankan tirada badan.
Arintaan ayaa laga yabaa iney u dhici weyso sidii la rabay hadii uu sii xoogeysto qilaaf cusub oo soo kala dhax galay masuuliyiinta TFGda oo salka ku haya sidii xilka looga qaadi lahaa ilaa 5 wasiir oo labane uu difaacayo C/wali Gaas 3ne uu difaacayo Shiikh Shariif halka Gudoomiyaha baarlamaanka isaguna dhinaciisa ka wado gucleyn kedib markii sida muuqata lumiyey tageeradii uu ka heli jiray beelaha Digil iyo Mirifle oo siyaasadiisa intaan soo gaarsiiyey kedib markii uu waji gabax kala kulmay safaradii uu dhawaantan ku soo maray waqooyiga America iyo Yurub.
La soco wararkena danbe iyo waxa ay dowlada Turkiga ka yeeli doonto siyaasadahan qar iska tuurka ah ee uu hada la soo baxay Shiikh Shariif ee u muuqaalka eg kor kortanka, maadama u waqtiga shaqadiisa iyo xiliga uu sii joogayo ay aad u yar tahay.
· admin on October 16 2011 12:48:20 · 0 Comments · 1843 Reads ·
14,613,836 unique visits